वीर अस्पतालले महिनामा १५ वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने - Health Today Nepal
वीर अस्पतालले महिनामा १५ वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने
July 11th, 2021 समाचार0comments
काठमाडौं, २७ असार : वीर अस्पतालले महिनामा कम्तिमा पनि १५ वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने योजना बनाएको छ । वीरमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अपरेसन थिएटर र जनशक्ति अभावका कारण वीरमा आक्कल झुक्कल मात्र मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने गरेको छ ।
वीर अस्पतालको ५०० शैयाको नयाँ सर्जिकल भवन सञ्चालनमा आएपछि मिर्गौला प्रत्यारोपणले फेरि गति लिने भएको हो । आईतबार सर्जिकल भवन उद्घाटन समारोहमा कोभिड– १९ युनिफाईड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमले वीर अस्पतालले अब हरेक महिना १५ वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
डा. गौतमले मिर्गौला फेल भएका विरामीको लागि ४० शैया डाइलासिसको संख्या बढाएर डाइलासिस शैयाको संख्या १०० पुर्याइएको बताए । नयाँ सजिर्कल भवन सहित वीरका सेवा विस्तारका लागि ८३१ वटा नयाँ जनशक्ति स्विकृत भएको समेत डा. गौतमले जानकारी दिए । सन् २००८ मा पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा पहिलो पटक वीर अस्पतालमा सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन भएको थियो ।
त्यसको केही समयपछि सरकारले डा. श्रेष्ठलाई भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारापण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएर सरुवा गरे पछि वीरको मिगौला प्रत्यारोपण सेवामा ब्रेक लागेको थियो ।
अहिले डा. श्रेष्ठको वीरमै सरुवा भएकाले वीरमा फेरि मिगौला प्रत्यारोपण सेवाले फड्को मार्नेमा वीरको नेतृत्व आशावादी भएको हो । मिर्गौला फेल हुने विरामीको संख्या बर्षेनी बढ्दै गए पनि वीरमा डाइलासिस र प्रत्यारोपण सेवा कछुवा गतिमा चलिरहेकोले थुप्रै सर्वसाधारण सेवाबाट बन्चित हुनु परेको छ । नेपालमा सरकारी स्तरबाट वीर सहित भक्तपुरस्थित शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालनमा छ ।
Previous article वीर अस्पतालको नवनिर्मित सर्जिकल भवनको उद्घाटन
Next article आजदेखि वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ५५ वर्षमाथिकालाई भेरोसेल खोप